Tetikasa famonosana renirano San Antonio, fandalinana tranga fampodiana amin'ny beach
Desambra 20, 2002
Buenaventura Bay, Kolombia
Sariho ny fomba fijerin'ny zavatra madion
nosy ao anaty
Iray amin'ireo rindran-kira fantsom-bolan'ny geotextile voalohany tany Kolombia dia ny fananganana nosy fitrandrahana voatokana izay hampiasaina amin'ny famatsiana sy ny fikoloana ny fako amin'ny fikojakojana tsiro tsara.
Ilay tetikasa dia ao amin'ny San Antonio Inlet, Buenaventura, Colombia. Ny faritra fitambaran-drongony no voalohany amin'ny nosy misy endrika boribory roa nokasaina tao amin'ity ony tondra-drano ity. Ity fomba fanamboarana vaovao sy vaovao ity dia misy fantsom-pamokarana ara-batana feno rano miaraka amina fitaovana feno fasika.
Ny fantsona geotextile dia napetraka hatrany amin'ny faran'ny farany mba hanomezana takelaka vakim-paritra ho an'ny famoahana rano maloto ao amin'ny fiovaovan'ny rano 4.0 m indroa isan'andro.
Rehefa vita ny nosy miraviravy dia ho toerana fitahirizana entana maloto mandra-pahafenoana azy ireo. Rehefa avy aorina izy ireo dia hambolena ao amin'ny ala honko Mangoro sy zavamaniry hafa ary hampiasaina manokana ho an'ny tanjon'ny tontolo iainana ihany.
Ny fijerin'ny sary momba ny famoronana tabilao geotextile
Ny tetik'asa fametahana dredged dia hita any amin'ny 8.0 km any afovoan'i Pasifika eo akaikin'ny fantsom-pahalalàna 10 m izay miasa amin'ny faritra atsimon'ny Nosy Buenaventura. Ny fivoaran'ny seranan-tsambo vaovao dia nahatonga ny filàna fananganana asa vaovao, ny fanodinana ny fikojakojana, ary ny fanariana fako fanampiny. Ireo faritra fanariana feta misy ankehitriny dia samy feno fahafaham-po na niharatsy noho ny tsy fikojakojana sy famolavolana tsy ampy.
Nisy ny fanandramana hanamboarana faritra fanariana famafazana simenitra sy gabions feno vatolampy mifanakaiky amin'ny tanànan'i Buenaventura ao amin'ny San Antonio Inlet nafoina noho ny toe-piainana sy ny fototra. Toerana fanariana fipetrahana hafa miampita ny renirano any amin'ny faritra natao ho an'ny Port of Solo dia namboarina tamin'ny famafazana fasika kely fa feno tanteraka ny fananganana vovo-dronono ary tsy misy intsony ny fanompoana.
Olana amin'ny tontolo iainana
Ny fahazoan-dàlana hanamboarana fotodrafitrasa misy fanamboarana ho an'ny fanamboarana làlan-drano misy loko miloko any Kolombia dia nanjary sarotra be tokoa noho ny teritery tontolo iainana nataon'ny governemanta eo an-toerana sy ny fanjakana. Ny fantsona fitetezana mankany amin'ity faritra ity dia voageja hatrany. Ny safidy fandroahana dia voafetra amin'ny toerana fanariana tany tsy misy eny an-tanety na mitondra fitaterana 80 km any amoron-dranomasina any Pasifika.
Ny fitaterana sy ny fanariana any an-dranomasina dia tsy noheverina ho mahomby ara-toekarena raha ampitahaina amin'ireo nosy mpanariana namboarina amin'ny fantsona geotextile.
Solontena maro toy ny fanamboarana toerana fanariana ny tany sy fako any amin'ny renirano mifanakaiky ny fantsom-pandrefesana no nihaona tamina ahiahy momba ny tontolo iainana ary tsy navela navela.
Ny faritra fanariana rano maloto any an-tanety dia tsy safidy noho ny fahavoazana ny hazo Ala honko, tsy misy toavina fototra, ary ny toerana voafetra. Ny fanamboarana dikes amin'ny fitaovana fototra, amin'ny rano misokatra miaraka amin'ny rano avo 4.0 m avo roa heny isan'andro dia tsy noheverina fa azo tanterahina ara-teknika raha tsy misy fantsona geotextile.
Ny tsipika 1100 m ny endrika amoron-dranomasina misy endrika boribory dia natao hampihenana ny sakana amin'ny riandrano. Ireo faritra fanariana fako vita amin'ny oval dia namboarina tamin'ny alàlan'ny «20 m circumference», 3.0 m fantsona geotextile avo izay namboarina tamin'ny lamba vita amin'ny génety polypropylene geotextile GT500.
Ity lamba ity dia manana ny haben'ny faritra manokatra 0.425 mm ary ny tanjaky ny rantsan-tany mivelatra any amin'ny milina sy ny lalana mankany 70.0 ary 96.3 KN / M tsirairay avy. Ny tanjaky ny seam dia manodidina ny 50 mankany 60% amin'ireto soa ireto.
Amin'ny haavon'ny 3.0 m ny fantsona geotextile misy ny 22 m3 isaky ny metatra toradroa misy rano maloto. Ny faritra fanariana voalohany dia manodidina ny 200 m ny sakany ary 300 m ny halavany ary ny faharoa kosa dia manodidina ny 300 m ary 600 m ny halavany ary tombanana ho 200,000 sy 600,000 m3 ny fitaovam-pikojakojana tsirairay avy.
Ny drafi-panamboarana dia ny hamenoana fantsom-batana goavambe 100 molo mahery vaika miaraka amina fitaovana maloto avy amin'ny fantsom-baravarankely mba hananganana ilay valan-javaboary ho an'ny faritra fanariana ranomasina.
Ny fantsona geotextile napetraka teo am-panolorana ilay soso-kevitra namboarina dia nitaingina vetivety nandritra ny famenoana ny tsangambato metaly lava 4.0 mika mifamatotra amin'ny fehin-kady nylon na eo amin'ny sisiny tsirairay amin'ny fantsona geotextile.
Ny fikatsahana fametrahana voalohany dia niteraka akora kely maivana be any amin'ny farany faran'ny 100 m ny geotextile sy ny fihenan'ny rano no nahatonga ilay fantsona geotextile voalohany nahatonga ilay fantsom-panaovana geotextile voalohany. Mba hampihenana an'ity vokatra ity dia feno ny fantson'ny geotextile ny fiakaran'ny 25 m misy fasika miaraka amin'ny ampahany tsy vita mijanona amin'ny tsipika kely mandra-pahatongan'ny 25 m an'ny fantsom-baovaon'ny gripa geotextile.
Ellicott® marika Series B890 Dredge
Tamin'ny voalohany, ilay drakitra dia nampiasa dredge Ellicott® Brand Series B890, ny "Don David", saingy niaina olana vitsivitsy nitazomana ireo fantson-tany geotextile nanohitra ny onja mirefy 1.2 m / faharoa. Izany dia nateraky ny fantson-tany geotextile nisondrotra tamin'ny rano 2.200 m3 tao anatin'ny adiny iray talohan'ny nitazomana ny ampy hamarana azy ireo.
Feno ny fantsona geotextile nofenoina
Voavaha izany tamin'ny alàlan'ny fanoloana ny dredge an'ny Series B890 tamin'ny dredge cutterhead an'ny 12 inch (305mm) Ellicott® Brand Series 370, ilay "Doña Sara" miaraka amin'ny 100 m an'ny tsipika fandefasana. Miaraka amin'ny dredge kely kokoa, ny rano be loatra dia nararaka tamin'ny lamba ary ny seranana feno sisa tavela mitazona ny fantsom-bary geotextile dia mihombo mandra-pahatongan'ny fasika ampy azy ireo.
Ny fanamboarana ny fitrandrahana fantsom-bolan'ny geotextile ho an'ny fitrandrahana akora vita amin'ny vanona voalohany dia vita tsara tamin'ity lohataona ity ary ampiasaina ho toerana fanariana fako. Hanomboka tsy ho ela ny fanamboarana ny fanariana endritsary faharoa.
Ny fampiasana ny fantsona geotextile hamolavola ny tanjaky ny valan-javaboary ho an'ny fotodrafitrasa famonosana fitaovana dia voaporofo fa azo hatsangana ary azo tanterahina amin'ny lafiny teknolojia sy ara-toekarena. Tsy ho nahomby ny fanamboarana ny valan-jiro isaky ny faritra fitrandrahana raha tsy nisy fantsona geotextile.
Nalaina avy tamin'ny harena ankibon'ny tany momba ny harena ankibon'ny tany sy ny fanamboarana
Nataon'i Jack Fowler, Ph.D., PE, Geotec Assocs., Vicksburg, MS
Eduardo Martinez, Pres., Dragados Hidraulicos, Bogota, Kolombia
Nicolas Ruiz, injeniera sivily, Bogota, Colombia
Carlos Ortiz, Bogota, Kolombia